बोटबिरुवाका आधारभूत आबश्यकताहरु- 3
ङ) माटो (Soil)
बोटबिरुवा हुर्कनमा अर्को प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने तत्व माटो पनि हो। बोटबिरुवाहरुले माटो खाँदैनन्। माटोमा भएका पौष्टिक तत्वहरु मात्र बोटबिरुवाका जराले सोसेर लिन्छन् तसर्थ माटो सहयोगी तत्व मात्र हो जसले बोटबिरुवालाइ पौष्टिक तत्व लिन र मजबुत भई जमीनमा खडा हुन मद्दत गर्दछ। माटोको किसिमले बोटबिरुवा हुर्कने प्रकृयामा फरक पर्दछ। भिन्न भिन्न बोटबिरुवाहरूलाई राम्ररी हुर्कन भिन्न भिन्नै प्रकृतिको माटो चाहिन्छ। बढी पानी चाहिने बिरुवालाई अलि खँदिलो माटो, जस्तै- चिम्टयाइलो, पाँगो आदिमा रोप्दा राम्ररी हुर्कन्छन्। त्यस्तै कम पानी चाहिने बिरुवालाई खुकुलो तथा माटोको मात्र कम भएको जस्तै- बलौटे तथा कङ्कड आदिमा रोप्दा बिरुवा राम्ररी हुर्कन्छन्।
क्याकटस, सुकुलेन्ट आदि जातका बिरुवालाई कम पानी चाहिने हुँदा बलौटे माटोमा रोपिन्छ। अर्किडजस्ता हावाबाट पौष्टिकतत्व लिने बिरुवाहरूलाई माटोको आवश्यकता नै पर्दैन। यस्ता बोटबिरुवालाई ढुङ्गा, इँटाका चोइटा, नरिवलको जट्टा आदिमा रोपिन्छ। बोटबिरुवा हुर्कनमा माटोको प्रकृति अर्थात पि. एच.(Soil pH-अमिलो माटो, गुलियो माटो र सामान्य माटो) को पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। केही बोटबिरुवा अम्लीय माटो (Acid soil)मा राम्ररी हुर्कन्छन् भने केही हुर्कन नसकी मर्छन् पनि। सामान्यतया माटोमा धेरै विविधता हुने हुँदा यसबारे केही जानकारी लिएर बिरुवा लगाउँदा सफलता पाउन सकिन्छ।
च) मल (Fertilizer)
बोटबिरुवा हुर्कनका लागि खाना तथा मलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। मल बोटबिरुवाको खाना हो। माटोमा हालिएको मलबाट पौष्टिक तत्व लिइ बोटबिरुवा हुर्कन्छन्। खाना/मल कम वा बढि भएमा यसले बोटबिरुवाहरुमा नराम्रो प्रभाव पार्दछ। बोटबिरुवा माटोमा जरा गाडेर हुर्कने भए पनि यसले माटो खाँदैन । माटोको काम बिरुवालाई खाना लिन सहयोग गर्नु मात्र हो । बिरुवाले जराको माध्यमबाट पानी, हावा तथा खाना लिने गर्दछ जुन हामीले माटोमा हाल्ने गर्दछौँ। बिरुवाको प्रकृतिअनुसार भिन्न भिन्न बिरुवाले भिन्न भिन्न मल रुचाउँछन्। मलका किसिम धेरै भए पनि मुख्य रूपले मललाई तीन किसिमले विभाजन गरिएको छ-
नाइट्रोजन- नाइट्रोजन बिरुवाको सबभन्दा महत्वपूर्ण खाना हो। यसबाट प्रोटिन प्राप्त हुन्छ। प्रोटिनले बिरुवा हरियो हुन, हाँगा तथा डाँठ मोटा, बलिया हुन, रोग तथा झारसँग लड्ने क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ। यो बिरुवाका लागि नभई नहुने मुख्य तत्व भए तापनि बढी भयो भने बिरुवा मर्न पनि सक्छ।
फस्फोरस- नाइट्रोजन पछि फस्फोरस दोस्रो महत्वपूर्ण तत्व हो जसबाट बिरुवालाई कार्बोहाइड्रेड प्राप्त हुन्छ । फस्फोरसले जरा फैलाइ बिरुवा अटल र बलियो बनाउन र निरन्तर जराको काम सुचारु गरिरहन मद्दत गर्दछ। जसबाट बिरुवा स्वस्थ र तन्दुरुस्त रहन्छ साथै फूल, फल, दाना लाग्न र भरिलो हुन पनि यसले सहयोग गर्दछ।
पोटासियम- पोटासियमबाट खनिजतत्व प्राप्त हुन्छ जसले बिरुवालाई रोग र झारसँग लड्ने क्षमता प्रदान गर्नुका साथै फूल, फल दाना भरिलो हुन सहयोग गर्दछ। पातजन्य बिरुवाका लागि पोटासियम तत्व त्यति उत्तम मानिँदैन जति नाइट्रोजनको आवश्यकता पर्दछ। हिजोआज बजारमा माथिका तीन तत्वहरु आवश्यकीय मात्रा अनुसार मिलाइएका थरिथरिका मलहरु पाइन्छन् जो नम्बरमा लेखिएका हुन्छन् जस्तै एन. पि. के. - २०-१०-१०।
अर्को: बोटबिरुवा र समस्या